In kabadan 15 Qori PKM ah iyo Hub farabadan oo ay Beelaha Bakool ku Wareejiyeen Xarakada Shabaabul Mujaahidiin. | Halganka Online
In kabadan 15 Qori PKM ah iyo Hub farabadan oo ay Beelaha Bakool ku Wareejiyeen Xarakada Shabaabul Mujaahidiin.
Posted on Luulyo 25, 2010 by halganka
Wilaayada Islaamiga Bay iyo Bakool ayaa hub aad u farabadan kala wareegtay qaar katirsan Beelaha Muslimiita Soomaalida ah ee ku dhaqan degmooyinka Gobalada Bay iyo Bakool.
Wararka naga soo gaaraya degmada Tagayeeglow wilaayada Bakool ayaa xaqiijinaya in Beelo Muslimiin ah ay Hub iyo rasaas farabadan ku wareejiyeen wilaayada Islaamiga Bay iyo Bakool si loogu xoojiyo Jihaadka ka socda Soomaaliya.
Munaasabad balaaran oo shalay gelinkii dambe ka dhacday degmadaasi Tayeeglow ayna goob joog ka ahaayeen waaliga Wilaayada Islaamiga Bay iyo Bakool Sheekh Mahad C/Kariim iyo saraakiil kale ayaa hub qiima badan ku fadhiyo lagu wareejiyay.
Beelaha kala ah Boqol-Hore iyo Ceel Qode ku wareejiyeen Hub dhan 15 PKM 3 Baasuuke iyo Gaadiid qoryaha Lidka diyuuradaha saaraayeen, Salaadiinta Beelaha Hubka wareejiyay ayaa madashii hubka lagu wareejinayay ka sheegay in ay garab taaganyihiin Mujaahidiinta Xarakada Al Shabaab.
Mid kamida salaadiinta ayaa isagoo qiiraysan sheegay in ay wax walba ku bixi doonaan Jihaadka Soomaaliya ka socda oo uu sheegay in uu u horseeday Amaan, Barwaaqo iyo sharaf ay yeesheen Beelaha Soomaalida ee dhibaatada kala kulmi jiray shisheeyaha iyo dulmi ay iyagu isku gaysan jireen.
Sheekh Mahad C/kariin oo isna hadlay ayaa sheegay in Hubkan ay ku wareejin doonaan Hogaamiyaasha Xarakada Shabaabul Mujaahidiin islamarkaana looga qayb qaadan doono Jihaadka ka socda Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho.
Wuxuu shacabka kula dar-daarmay in ay Maalkooda iyo dhiigooda u huraan difaaca Diinta Islaamka hadii aysan sidaasi yeelina ay dhedhemi doonaan Dulliga ka jira qaybo kamid ah dalka Soomaaliya.
Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa taageero aan caadi ahayn ka heshay Beelaha Soomaalida ee ku dhaqan Koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya oo hub iyo dhaqaale ugu deeqay Mujaahidiinta
« Maamulka Kismaayo ” Cudurka Shubanka kama Dilaacin Kismaayo Idaacadda Shabelle ayaa Been ka sheegtay Caafimaadka Shacabka”. Culumadii u Hambalyeysay Heshiiskii Dhexmaray Zenawi iyo Ibraahim-dheere (Dhegeysi) »